अब सिंहदरबार बैद्यखाना पनि जी.एम.पी.मा – Nepali Health
अब सिंहदरबार बैद्यखाना पनि जी.एम.पी.मा
२०७३ वैशाख १० गते १५:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने सरकारी निकाय सिंहदरबा बैद्यखाना विकास समिति कुशल औषधी निर्माण प्रक्रिया जीएमपी प्रकृयामा प्रवेश गरेको छ । औषधी व्यवस्था विभागले बैद्यखानालाई जीएमएपीका लागि स्वीकृति दिएको हो ।
जीएपपीमा गएपछि औषधीको उत्पादनका लागि चाहिने पूर्वाधार, प्रविधि , शुद्धता र गुणस्तरमा कुनैमा पनि कमजोर हुँन् मिल्दैन् ।
समितिका प्रवन्ध निर्देशक डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले आयुर्वेदिक औषधीलाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि बैद्यखाना जीएमपीमा गएको बताए । उनले जीएमपीको विशेष खालको मापदण्ड हुने भन्दै त्यो पुरा हुँदा आयुर्वेदिक थप विश्वाशिलो र भरपर्दो हुने बताए ।
‘जिवाणुरहित, हेवि मेटल नभएका अर्थात शरीरलाई असर गर्ने तत्वहरु नरहोस भन्ने गरी निर्माण प्रक्रियाको खाश मापदण्ड हो यो भएपछि बैद्यखानाका उत्पादन थप भरपर्दो र विश्वाशिलो हुनेछ’, डा. गिरीले भने ।
झण्डै ३७० बर्ष अघि राजा प्रताप मल्लको पालामा काठमाडौँको हनुमान ढोकामा स्थापना गरिएको बैद्यखानाको औषधी उपचार विसं २००८ साल पछि मात्रै आम सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो । विसं २०५१ सालमा यो विकास समितिमा परिणत भएको थियो ।
परम्परागत ढंगबाट आयूर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्दै आएको बैद्यखानाले अहिलेपनि दुई सय भन्दा बढी प्रकारका आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ ।
बदामका पाँच फाइदा
स्वास्थ्य समूहबाट सचिव बनाउन गच्छदारलाई ज्ञापन पत्र